2013 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Peaky Blinders (2013) Season5Complete Unicode ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ ပထမကမ်ဘာစဈကွီး ပွီးတဲ့အခြိနျ အင်ျဂလနျနိုငျငံ ဘာမငျဂမျမွို့ကို နောကျခံ ထားထားပါတယျ။ ပွငျသဈမှာ စဈတိုကျပွီး အသကျရှငျကနျြတဲ့ အင်ျဂလနျစဈသားတှကေတော့ ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာကို ပွနျကွတဲ့အခြိနျမှာ ရှယျဘီညီအဈကို သုံးယောကျကလညျး ကိုယျ့အိမျကိုယျ ပွနျလာခဲ့တယျ။ ဒီစီးရီးတဈခုလုံးမှာ အဓိကဇာတျကောငျက ရှယျဘီမိသားစုပါပဲ။ အာသာရှယျဘီ သောမတျရှယျဘီ ဂြှနျရှယျဘီ အဒေါရှယျဘီ ဖငျးရှယျယီနဲ့ သူတို့အဒျေါဖွဈတဲ့ ပိုလီရှယျဘီ စုစုပေါငျး (၆) ယောကျက မတူညီတဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ သရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ ရှယျဘီညီအဈကိုသုံးယောကျဟာ စဈပှဲကနေ အိမျပွနျရောကျလို့ မိသားစုရဲ့ စီးပှားရေးမှာ ပွနျဝငျလုပျကွတဲ့အခါ အမွငျတှကေ အရငျကနဲ့ မတူတော့သလို လုပျပုံကိုငျပုံတှကေလညျး ကှဲပွားလာတယျ။ အဓိကကတော့ သောမတျရှယျဘီပေါ့။ သောမတျရဲ့ စီးပှားရေးလုပျပုံ၊ ကိုငျတှယျပုံတှကေ အ‌တျောလေး ခနျ့မှနျးရခကျတယျ။ လူမိုကျလုပျတဲ့အခါ လုပျနဲ့ ရှယျဘီတို့ မိသားစုက 'Peaky Blinders' ဆိုတဲ့ ဂိုဏျးနာမညျနဲ့ ထငျရှားလာတယျ။ Peaky Blinders မိသားစုကဆိုရငျ အားလုံးက အငွိမျးပဲ၊ သူတို့ မိသားစုကိုဆိုရငျ အဲဒီမွို့က ...
Peaky Blinders (2013) Season4Complete Unicode ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ ပထမကမ်ဘာစဈကွီး ပွီးတဲ့အခြိနျ အင်ျဂလနျနိုငျငံ ဘာမငျဂမျမွို့ကို နောကျခံ ထားထားပါတယျ။ ပွငျသဈမှာ စဈတိုကျပွီး အသကျရှငျကနျြတဲ့ အင်ျဂလနျစဈသားတှကေတော့ ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာကို ပွနျကွတဲ့အခြိနျမှာ ရှယျဘီညီအဈကို သုံးယောကျကလညျး ကိုယျ့အိမျကိုယျ ပွနျလာခဲ့တယျ။ ဒီစီးရီးတဈခုလုံးမှာ အဓိကဇာတျကောငျက ရှယျဘီမိသားစုပါပဲ။ အာသာရှယျဘီ သောမတျရှယျဘီ ဂြှနျရှယျဘီ အဒေါရှယျဘီ ဖငျးရှယျယီနဲ့ သူတို့အဒျေါဖွဈတဲ့ ပိုလီရှယျဘီ စုစုပေါငျး (၆) ယောကျက မတူညီတဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ သရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ ရှယျဘီညီအဈကိုသုံးယောကျဟာ စဈပှဲကနေ အိမျပွနျရောကျလို့ မိသားစုရဲ့ စီးပှားရေးမှာ ပွနျဝငျလုပျကွတဲ့အခါ အမွငျတှကေ အရငျကနဲ့ မတူတော့သလို လုပျပုံကိုငျပုံတှကေလညျး ကှဲပွားလာတယျ။ အဓိကကတော့ သောမတျရှယျဘီပေါ့။ သောမတျရဲ့ စီးပှားရေးလုပျပုံ၊ ကိုငျတှယျပုံတှကေ အ‌တျောလေး ခနျ့မှနျးရခကျတယျ။ လူမိုကျလုပျတဲ့အခါ လုပျနဲ့ ရှယျဘီတို့ မိသားစုက 'Peaky Blinders' ဆိုတဲ့ ဂိုဏျးနာမညျနဲ့ ထငျရှားလာတယျ။ Peaky Blinders မိသားစုကဆိုရငျ အားလုံးက အငွိမျးပဲ၊ သူတို့ မိသားစုကိုဆိုရငျ အဲဒီမွို့က ...
TMDb: 8.6/10 2533 votes
Peaky Blinders (2013) Season3Complete Unicode ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ ပထမကမ်ဘာစဈကွီး ပွီးတဲ့အခြိနျ အင်ျဂလနျနိုငျငံ ဘာမငျဂမျမွို့ကို နောကျခံ ထားထားပါတယျ။ ပွငျသဈမှာ စဈတိုကျပွီး အသကျရှငျကနျြတဲ့ အင်ျဂလနျစဈသားတှကေတော့ ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာကို ပွနျကွတဲ့အခြိနျမှာ ရှယျဘီညီအဈကို သုံးယောကျကလညျး ကိုယျ့အိမျကိုယျ ပွနျလာခဲ့တယျ။ ဒီစီးရီးတဈခုလုံးမှာ အဓိကဇာတျကောငျက ရှယျဘီမိသားစုပါပဲ။ အာသာရှယျဘီ သောမတျရှယျဘီ ဂြှနျရှယျဘီ အဒေါရှယျဘီ ဖငျးရှယျယီနဲ့ သူတို့အဒျေါဖွဈတဲ့ ပိုလီရှယျဘီ စုစုပေါငျး (၆) ယောကျက မတူညီတဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ သရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ ရှယျဘီညီအဈကိုသုံးယောကျဟာ စဈပှဲကနေ အိမျပွနျရောကျလို့ မိသားစုရဲ့ စီးပှားရေးမှာ ပွနျဝငျလုပျကွတဲ့အခါ အမွငျတှကေ အရငျကနဲ့ မတူတော့သလို လုပျပုံကိုငျပုံတှကေလညျး ကှဲပွားလာတယျ။ အဓိကကတော့ သောမတျရှယျဘီပေါ့။ သောမတျရဲ့ စီးပှားရေးလုပျပုံ၊ ကိုငျတှယျပုံတှကေ အ‌တျောလေး ခနျ့မှနျးရခကျတယျ။ လူမိုကျလုပျတဲ့အခါ လုပျနဲ့ ရှယျဘီတို့ မိသားစုက 'Peaky Blinders' ဆိုတဲ့ ဂိုဏျးနာမညျနဲ့ ထငျရှားလာတယျ။ Peaky Blinders မိသားစုကဆိုရငျ အားလုံးက အငွိမျးပဲ၊ သူတို့ မိသားစုကိုဆိုရငျ အဲဒီမွို့က ...
TMDb: 8.6/10 2414 votes
I Can Hear Your Voice (2013) Complete Unicode I Can Hear Your Voice 2013 -Korean television series– (မငျးအသံလေးမြား ကွားရငျ) မွနျမာစာတနျးထိုး (Korea) SBS ရုပျသံလိုငျးကနေ ထုတျလှငျ့ခဲ့တဲ့ ဟာသ၊ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ၊ မှုခငျး၊ အခဈြဇာတျလမျးတှဲ တဈခုဖွဈပါတယျ။ မငျးသား လီဂြောငျဆော့နဲ့အတူ မငျးသားယှနျးဆနျယောငျးနဲ့ မငျးသမီး လီဘိုယောငျးတို့က ခေါငျးဆောငျအဖွဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ အပိုငျး (၁၈) ပိုငျးရှိပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြး အသကျ ၉ နှဈအရှယျ ဆူဟာ ဟာ ဖခငျဖွဈသူနဲ့အတူ ကားစီးနစေဉျမှာ ရုတျတရကျ မငျဂြှနျကှတျ ဆိုတဲ့ လူတဈဦးရဲ့ ထရပျကားနဲ့ ဝငျတိုကျတာကိုခံလိုကျရပါတယျ။ မငျဂြောငျကှတျဆိုတဲ့လူဟာ သူရဲ့ ထရပျကား ထဲကနေ ထှကျလာခဲ့ပွီးတော့ သူတို့ကားဆီလာခဲ့ပါတယျ။ ဆိုဟာနဲ့ မငျဂြှနျကှတျတို့ဟာ မကျြလုံးခငျြးဆုံမိလိုကျပွီး ရုတျတရုတျ ဆိုဟာ နားထဲကွားလိုကျရတာက ထိုလူစိမျးရဲ့ အတှေးပါပဲ။ “ငါ ဒါကို အဆုံးသတျရမယျ” ...
Peaky Blinders (2013) Season2Complete Unicode ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ ပထမကမ်ဘာစဈကွီး ပွီးတဲ့အခြိနျ အင်ျဂလနျနိုငျငံ ဘာမငျဂမျမွို့ကို နောကျခံ ထားထားပါတယျ။ ပွငျသဈမှာ စဈတိုကျပွီး အသကျရှငျကနျြတဲ့ အင်ျဂလနျစဈသားတှကေတော့ ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာကို ပွနျကွတဲ့အခြိနျမှာ ရှယျဘီညီအဈကို သုံးယောကျကလညျး ကိုယျ့အိမျကိုယျ ပွနျလာခဲ့တယျ။ ဒီစီးရီးတဈခုလုံးမှာ အဓိကဇာတျကောငျက ရှယျဘီမိသားစုပါပဲ။ အာသာရှယျဘီ သောမတျရှယျဘီ ဂြှနျရှယျဘီ အဒေါရှယျဘီ ဖငျးရှယျယီနဲ့ သူတို့အဒျေါဖွဈတဲ့ ပိုလီရှယျဘီ စုစုပေါငျး (၆) ယောကျက မတူညီတဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ သရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ ရှယျဘီညီအဈကိုသုံးယောကျဟာ စဈပှဲကနေ အိမျပွနျရောကျလို့ မိသားစုရဲ့ စီးပှားရေးမှာ ပွနျဝငျလုပျကွတဲ့အခါ အမွငျတှကေ အရငျကနဲ့ မတူတော့သလို လုပျပုံကိုငျပုံတှကေလညျး ကှဲပွားလာတယျ။ အဓိကကတော့ သောမတျရှယျဘီပေါ့။ သောမတျရဲ့ စီးပှားရေးလုပျပုံ၊ ကိုငျတှယျပုံတှကေ အ‌တျောလေး ခနျ့မှနျးရခကျတယျ။ လူမိုကျလုပျတဲ့အခါ လုပျနဲ့ ရှယျဘီတို့ မိသားစုက 'Peaky Blinders' ဆိုတဲ့ ဂိုဏျးနာမညျနဲ့ ထငျရှားလာတယျ။ Peaky Blinders မိသားစုကဆိုရငျ အားလုံးက အငွိမျးပဲ၊ သူတို့ မိသားစုကိုဆိုရငျ အဲဒီမွို့က ...
TMDb: 8.6/10 2276 votes
Empress Ki (2013) Complete Korea Series တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် 2013 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး IMDb rating 8.7/10 ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးကို တင်ပေး လိုက်ပါပြီ။ နောက်ပြီး ဒီဇာတ်ကားဟာ Rotten Tomatoes မှာလည်း rating 100% အထိကို ရရှိထား တယ်ဆိုတော့ကာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ကောင်းမွန်မှုကို ထွေထွေထူးထူးများ ညွှန်းစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါ တယ်။ စုစုပေါင်း အပိုင်း 51 ပိုင်းထိရှိပြီး နောက်ထပ်လက်ကျန်ပိုင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်အပြီးအထိ ကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်။ Credit Review Quality 720p File Size - 490 MB Episode 1 Google Drive , M File , One Drive , Google Drive Episode2Google Drive , M File , One ...
My Love From Another Star (2013) Complete လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၀၀ တုန်းကကမ္ဘာမြေပေါ်ကို လေ့လာဖို့လာကြတဲ့ ကြယ်အစုအဝေးတစ်ခုထဲက ဂြိုလ်သားတစ်ဦးဟာ သူ့ကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကူညီရင်းနဲ့ ကမ္ဘာကနေမပြန်ပဲ နှစ် ၄၀၀ ကျော် နေခဲ့ရပါတယ်..ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေလတွေအချိန်တွေပြောင်းလဲပြီး နောက် နှစ် ၄၀၀ မှာတော့ သူအိမ်ပြန်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရရှိလာပါတယ် နောက်သုံးလနေရင် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကအပြီးသတ်ပြန်ခွင့်ရမှာပါ..ဒီဂြိုလ်သားလေးနာမည်ကတော့ ဒိုမင်းဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်..မျက်မှောက်ခေတ် ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်လောကမှာနာမည်ကြီး မင်းသမီးကတော့ ချောင်းဆုန်း၇ီ ပဲဖြစ်ပါတယ်..သူဟာ နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်ပေမယ့်လည်း အမြဲတမ်းအမှားတွေအလွဲလုပ်..ပေါက်ကရတွေမစဉ်းစားပဲပြောတတ်လို့လူအများရဲ့ လှောင်ရယ်ခြင်းကိုခဏခဏခံရတဲ့သူပေါ့..မင်းသမီးချောင်းဆုန်းရီဟာ အိမ်အသစ်ကို ပြောင်းလာရင်းနဲ့ ဒိုမင်းဂျွန်နဲ့စတင်သိရှိခဲ့ပါတယ်..သိတဲ့ပုံကလည်းထုံးစံအတိုင်းအလွဲတွေနဲ့ပဲပေါ့ ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကပြန်ခါနီးသုံးလလောက်သာလိုတော့တဲ့ဒိုမင်းဂျွန်နဲ့ချောင်းဆုန်းရီတို့ ကြားထဲကဆက်နွယ်မှုလေးတွေဘယ်လိုတွေလဲ..ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ Credit Review Quality - 720p File Size - 490 MB Episode 1 Google Drive , Cloud M-Sub , One Drive Episode2Google Drive , Cloud M-Sub , One Drive Episode3Google Drive , Cloud M-Sub , One Drive Episode4Google Drive , Cloud M-Sub ...
Secret Love (2013) Complete ကန်ယိုဂျွန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပေါင်းစုံကိုလုပ်ပြီး သူမရဲ့ချစ်သူကိုရှေ့နေဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာ ကိုးနှစ်နီးပါးတောင်ရှိလို့နေပါပြီ ခိုင်မာအချစ် ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ တစ်နေ့သူတို့ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေတလှေကြီးနဲ့ပေါ့ ရှေ့နေဖြစ်တော့ သူမရဲ့ယောက္ခမတွေက သူနဲ့သဘောမတူချင်ကြတော့ပါဘူး သူမကိုငြို ငြင်တာကိုသိရက်နဲ့လည်း အားလက်ရက်တွေမှာ ယောက္ခမအိမ်ကိုလာပြီး ဝေယာဝစတွေလုပ်ပေးပါတယ် မလာနဲ့လို့နှင်ကြပေမယ့်သူကတောာ့လာမြဲပါပဲ - ဂျိူ မင်ဟွတ် ဟာသူဌေးသား လူပေလူတေလေးတစ်ယောက်ပါ မိဘတွေကလုပ်ငန်းတူမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ချပေးဖို့လုပ်ပေမယ့် သူကတော့ သူ့ချစ်သူ ဂျီအင်းကိုသာချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့သူ့ချစ်သူဟာသူနဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ် သူဘယ်လိုလိုက်ရှာရှာ သူ့ကိုရှောင်ပုန်းနေခဲ့ပါတယ် ---- မိုးတွေသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေ့တဲ့တစ်ည ကန်ယိုဂျွန်းကိုသူ့ချစ်သူအန်ဒိုဟွန်းက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့သူပျော်နေတယ် လက်ထပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မယ် ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ သူအပျော်ကြီးပျော်နေတယ် မိုးကပိုသည်းလာတယ် အရှေ့ကိုတောင် ကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်တော့အောင်ပဲ ကားကိုမနည်းထိန်းမောင်းနေရတယ် ရုတ်တရက် .....ဒုန်း..ဆိုတဲ့မြည်ဟီးသံကြီးနဲ့အတူ သူတို့ကားလေးလည်ထွက်သွားတယ် တစ်ခုခု တိုက်မိတာ သေချာပါတယ် သံသယစိတ်တွေနဲ့အန်ဒိုဟွန်း ထွက်အကြည့် သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့အမျူ်းသမီးတစ်ယောက် သူတုန်လုပ်သွားတယ် သူ့ချစ်သူ ကန်ယိုဂျွန်းကမေးပေမယ့် သူလိမ်လိုက်တယ် စည်ပိုင်းကိုတိုက်မိတာပါတဲ့ နောက်တစ်နေ့ တိုက်မကားက ကန်ယိုဂျွန်းကားမို့ ကန်ယိုဂျွန်း အဖမ်းခံခဲ့ရတယ် တကယ်တမ်းကားမောင်းတာက အန်ဒိုဟွန်းပါ သူ့ချစ်သူရှေ့နေ နာမည်ပျက်မှာဆိုးတဲ့အတွက် သူထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတယ် ထောင်ထဲရောက်မှ သိလိုက်တာတစ်ခုကသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေတာပါပဲ -ဂျိူမင်ဟွတ်တစ်ယောက်သူ့ချစ်သူကိုရှာတွေ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ပျော်ရပေမယ့် သူ့ချစ်သူ ကားတိုက်ခံခဲ့ရတယ် ကံဆိုးတာတစ်ခုက သူ့ချစ်သူမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေတာပါပဲ ကားတိုက်အရှိန်ပြင်းလို့ ဆေးရုံအရောက်မှာဆုံးသွားခဲ့တယ် သူ့ချစ်သူကိုသတ်တဲ့သူကိုပြန်ကလဲ့စားခြေလိုတာကြောင့် ထောင်ကထွက်လာတဲ့ကန်ယိုဂျွန်းကို ကလဲ့စားလိုက်ခြေပါတော့တယ် ကလဲ့စားခြေရင်း အဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာနဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့.,. Credit Review Quality - HDTV 720p File Size - 530 MB Episode 1 Google Drive , Cloud M-Sub , One Drive Episode2Google Drive , Cloud M-Sub , One Drive Episode3Google Drive , ...
The Heirs (2013) Complete တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အားပေးမှု့အပြည့်ဝရရှိထားတဲ့ မင်းသားလီမင်ဟို နဲ့ မင်းသမီးပတ်ရှင်ဟေးတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲက အကောင်းဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ဒီစီးရီးလေးဟာ Rating 7.6/10 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် American Digital Distribution Platform ‘Dramafever’ နဲ့ Korean Production တို့က ပထမဆုံး Co Produced ပြုလုပ်ထားတဲ့ Drama အမျိုးအစားဇာတ်လမ်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမှာလည်း တော်တော်လေး Hit ဖြစ်ခဲ့ပြီး Asia မှာလည်း အရမ်းလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်….. ဒီစီးရီးလေးဟာဆိုရင် နာမည်ကြီးစာရေးဆရာမ ( Decendents of the Sun , Goblin) တို့ကို ရေးတဲ့ စာရေးဆရာမ Kim Eun Seok ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Hallyu လောကမှာ နာမည်ကြီး ပရိသတ်အခိုင်အမာရထားတဲ့ Lee min ho နဲ့ Park Shin Hye ကိုတွဲပေးထားပြီး အရံ ဇာတ်ပို့တွေကအစ နာမည်ရထားတဲ့သူတွေပဲ သုံးထားလို့ မထွက်ခင်ကတည်းက ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့စီးရီးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီးအထီးကျန်ဆန်နေရတဲ့သူဌေးသားလေး ကင်တန်နဲ့ သူဆင်းရဲမလေး ချားအွန်ဆန်းတို့ လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ မိုးနဲ့မြေ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ...
The Heirs (2013) Complete